Windows7Themes အား အဆင့်မြှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Windows7Themes အား အဆင့်မြှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း
မိသားစုဝင်တွေကို တစ်ခု မေးကြည့်ပါရစေ။
တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ကွန်ပြူတာဆိုတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့တိုင်း ထိတွေ့ပြီး သုံးသာ သုံးနေကြတာ - အဲ့ဒီ့ Operating system အပေါ် တကယ်ရော နှစ်သက်ကျေနပ်မှု ရှိရဲ့လား ??
ဒီမေးခွန်းကို ကိုယ့်စိတ်ထဲကို သေသေချာချာကြည့်ပြီး ဖြေကြည့်ပါ။
တကယ်တော့ အရင့်အရင်က ကျွန်တော်တို့ Windows XP နဲ့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေခဲ့တယ် - အဲ့နောက် Windows Vista - နောက် Windows7... OS တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းသွားတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း သူတို့ပြောင်းတဲ့ နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ခဲ့ကြတယ် - တကယ်တမ်း OS တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပြောင်းသုံးဖြစ်ခဲ့သမျှ အခြေအနေတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးကြည့်ရင် တကယ်လိုအပ်လို့ ပြောင်းခဲ့တာလား ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ပြောရမယ် - Features တွေ Security တွေ ဘာတွေဘယ်လို အားသာချက် ရှိတယ် ဆိုတာတွေကို နောက်မှာ ထားလိုက်ဦး - တကယ်တမ်း Windows7စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးနေကြသူ ၁၀၀ မှာ ၇၀ လောက်က Features တွေကောင်းလို့ Security တွေ အားသာချက် ရှိလို့ ဆိုတာတွေထက် အရင်သုံးနေကျ OS တွေထက် အသွင်ပိုဆန်းပြီး အမြင်ပိုလှလို့ သုံးဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင် ပိုမှန်ကောင်း မှန်လိမ့်မယ်။
အဲ့တော့ ခု Windows7ထွက်တာလည်း နှစ်နှစ် ပြည့်တော့မယ် - တော်တော်များများလည်း Windows7မှ Windows7ဖြစ်နေကြပြီ - Windows7နဲ့ အတော်လည်း ယဉ်ပါးနေကြပြီ - လူဆိုတဲ့ သဘောက အလှအပတော့ ကြိုက်ကြစမြဲပဲ - Windows7ဘယ်လောက်လှပါတယ် ပြောပြော သူ့ထက်သူ ပိုလှအောင် ကျွန်တော်တို့တွေ Themes အသစ်တွေပြောင်းတယ် - Wallpapers လှလှလေးတွေ ရှာတယ် - တင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သိထားဖို့ သင့်တာ ခုလက်ရှိချိန်ထိ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကြတဲ့ Themes တွေဆိုတာ Windows7မှာ Themes - Change လိုက်တယ်လို့သာ ပြောတာ တကယ်တော့ သူတို့ကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်း Colours နဲ့ Walpapers ပြောင်းသွားတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ တစ်ခြားဘာမှမှ ထူးထူးခြားခြား မပြောင်းတာ။ ဒါကို အားလုံးလည်း သတိထားမိကြမယ် ထင်တယ်။ အဲ့တော့ Themes ပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အချိန်တိုင်း အရိုးအရှင်းဆုံး ပုံစံလေးနဲ့ စွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ Themes တစ်ခု ကိုယ့် စက်ထဲ ရောက်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ပြင်ယူကြမလဲ။ ဒါလေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကနေ့ချိန်ထိ မြန်မာဖိုရမ်တွေ ၊ ဘလော့တွေနဲ့ နည်းပညာမျှဝေတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ ဖော်ပြတာမတွေ့မိသေးတဲ့ ( ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက် ) Windows7Themes ပြုပြင်နည်းတစ်ခုပါ။ ဘာလို့ မဖော်ပြကြသေးတာလဲ ဆိုတော့ သတိမထားမိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သတိထားမိလို့ လက်ရှိသုံးနေကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေလည်း မိသားစုဝင်တွေကို ဒီအကြောင်း မိတ်ဆက်မပေးရသေးဘူး။ အဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော် ဒီ Thread ကို စရေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ခု ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ Themes ပြင်ဆင်နည်းတွေက ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်သုံးနေကျ Themes တွေကို Click တစ်ချက် နှစ်ချက် ပေးယုံနဲ့ ပြောင်းလို့ မရဘူး - သူ့ကို သုံးချင်ရင် သာမန်သုံးနေကျ Themes တွေထက် ၄ - ၅ ဆင့်လောက် ပိုပြီး ပြင်ဆင်ရတယ်။ အဆင့်တွေကို နားလည်ထားဖို့လည်း လိုတယ်။ သာမန်ထက် နဲနဲလေး လုပ်ရမယ့် အဆင့်ပိုများလို့ ဒီ Thread ကို Windows7Themes အား အဆင့်မြှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်ကြီး ခက်ခက်ခဲခဲ နက်နက်နဲနဲ အကြောင်းအရာတွေ ရေးသွားမယ့် Thread တစ်ခုမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး -
မိသားစုဝင်တွေ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာကို ဒီ့ထက်ပိုပြီး ရှုချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဖန်တီးရမယ် - ဘာတွေသိထားဖို့လိုမယ်။ ဘယ်အဆင့်တွေ Software တွေ အသုံးချရမယ်ဆိုတာ မိတ်ဆက်ရှင်းပြ သဘောမျိုးရေးပေးသွားမှာပါ။ ပြင်ဆင်ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ တွေ့မြင်ရမယ့် Windows7ရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ အလှအပတွေကို ကနဦး ခံစားနိုင်အောင် မိတ်ဆက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကိုယ့်စက်မှာ သုံးထားတဲ့ Windows7Themes တွေနဲ့ ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အပြင်အဆင်တွေမှာ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိသလဲ - ဒါကို မိသားစုဝင်များ ကိုယ်တိုင် သုံးသပ်ပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ့်စက်က အပြင်အဆင်ကိုပဲ ကိုယ် သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ရက်တွေ ဒီ Thread ကို ဖတ်နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး - ကျော်ချသွားလိုက်ပါ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတဲ့ အပြင်အဆင်ကို သဘောကျမယ် ဆိုရင်တော့ နောက်ရက်တွေ ဒီ Thread ကို မပြတ်တမ်း စောင့်ဖတ်ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အချိန်အများကြီး မရတာမို့လို့ အရင်ရေးဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ Thread တစ်ချို့နဲ့ ဒီ Thread ကို ဖြေးဖြေးရှင်း ညှိပြီး ရေးသွားပေးပါ့မယ်။
Last edited by KznT; 07-05-2011 at 10:57 AM..
ကိုသဝေထိုး, ကွက်တိ, ခွန်ညီး, ဆန်းမောင်, ဒဿဂီရိ, နီထွန်းဦး, ဘဘကြီး, မျိုးဟန်ထက်, သက်တန့်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, အယ်သား, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ပေါ်ဦး, နိုးတူး, ah nai, arkaraung, AZM, bagothar85, bonge, g00gle, goldstar, ko myo, kyawminkhoung, KZaw, Lwin Thu, minthike, openeyes, pannuko, tu tu, yawnathan, zo
ပြန်စာ - Windows7Themes အား အဆင့်မြှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း
Windows7Themes တွေကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးတဲ့ အခါ အရင်ဆုံး သိထားဖို့ လိုတာက ဒီလို အမြင်ရှင်းပြီး ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်ဆန်းတဲ့ Themes တွေဘယ်မှာ ရနိုင်လဲ ဆိုတာ သိထားဖို့ လိုလာပါတယ်။ အဲ့အတွက် အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုကတော့ DeviantArt ပါ - Wallpapers, Themes, Icons ... စသဖြင့် ကျွန်တော် ဘာပဲလိုလိုအဲ့မှာပဲ အမြဲ သွားရှာဖြစ်တယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ ပျံ့နေသမျှ Themes တွေ Icons တွေ တော်တော်များများကလည်း အဲ့မှာ အခြေပြုပြီး ထွက်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတာမျိုးတွေလည်း ရှိပေမယ့် တော်တော်များများကို Free ပေးထားတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ DeviantArt ကနေပြီး စိတ်ကြိုက်ရှာ ဒေါင်းလုပ်ချထားတဲ့ Themes ( 55 ) ခု ရှိပါတယ်။ Themes တွေကို ဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာ မိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားရင် နောက်ပို့စ်တွေမှာ အဲ့ဒီ့ Themes တွေအားလုံးကို မိသားစုဝင်များ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဝေမျှပေးသွားပါမယ်။
Windows customization လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ 3rd party themes တွေကို Windows က အသုံးပြုခွင့် မပေးပါဘူး - ကျွန်တော် အရင်တစ်ခါ ရေးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ Windows7Themes လိုမျိုး Microsoft ကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်ထားတဲ့ Themes မျိုးတွေကိုသာ Windows က လျှောလျှောရှုရှုနဲ့ အသုံးပြုခွင့်ပေးပါတယ်။ 3rd party themes ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာက ခွဲခြားဖို့ မခက်ပါဘူး - ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ Windows7Themes file တစ်ခုခုကို Double click သာ ပေးကြည့်လိုက်ပါ -
နဂိုသွင်ပြင်နေထားကနေ ပုံစံပြောင်းပေးသွားတယ်ဆိုရင် 3rd party themes မဟုတ်ဘူး - Double click ပေးလည်း ဘာမှ ထူးခြားမလာပဲ နဂိုပုံအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒါ Windows က လက်မခံတဲ့ 3rd party themes စသဖြင့် အကြမ်းဖျဉ်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ Windows ကနေ Default အနေနဲ့ လက်မခံတဲ့ 3rd party themes တွေကို ကိုယ့်စက်မှာ install လုပ်ချင်တဲ့ အခါ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမလဲ။ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အားလုံးထဲက မိသားစုဝင်တိုင်းအတွက် အလွယ်ကူဆုံး ဖြစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ချို့နဲ့ အရင်ဆုံး စပြီး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
အားလုံးထဲမှာ End users တွေ အတွက် သုံးဖို့ အသင့်တော်ဆုံးက CustoPack Tools ပါ - Windows XP (32-bit), Windows Vista (32 or 64-bit), Windows7(32 or 64-bit) အားလုံးမှာ သုံးလို့ ရအောင် CrystalXP.net team ကနေ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ CustoPack Tools နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသုံးပြုနည်းနဲ့ တကွ တစ်ခြား သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ အားလုံးကို Frequently Ask Questions အဖြစ်နဲ့ သူတို့ ရေးထားပေးပြီးသား ရှိပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် ပြောရရတော့ CustoPack Tools ကို သုံးဖို့အတွက် အဆင့် နှစ်ဆင့်လိုတယ်။ အရင်ဆုံး CustoPack Tools ကို ဒီနေရာကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး Install အရင်လုပ်ထားရမယ်။ အဲ့ဒီ့ Tools ကို သွင်းရတဲ့ အခြေခံရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ် install လုပ်ချင်တဲ့ Themes တွေကို တစ်ခုကနေတစ်ခု အချိန်းအပြောင်း လုပ်တဲ့ နေရာမှာ Manually ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုပဲ Click လေးပေးယုံနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်အောင် သွင်းထားရတာ။ အဲ့တာပြီးသွားရင် ကိုယ် Install လုပ်ချင်တဲ့ Themes တွေကို ဒီနေရာမှာ စိတ်ကြိုက် ရွေးယူ ဒေါင်းလုပ်ချပါ။
ရလာတဲ့ CustoPack တွေကို CustoPack Tools သုံးပြီး ဘယ်လို Install လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ။ Youtube ကြည့်လို့ ရသူများ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Video clip ကနေ တစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အားလုံး သွင်းပြီးလို့ Restart ပေးပြီး ပြန်တက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်သုံးတဲ့ Windows7Themes က အရင်သုံးနေကျ Themes တွေနဲ့ မတူပဲ တစ်မူထူးခြားပြီး လှပနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ နောက်ပိုင်း သုံးရတာ ငြီးငွေ့လာလို့ CustoPack Tools နဲ့ Themes တွေကို Uninstall ပြန်လုပ်ချင်ပြီ ဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Youtube ကြည့်လို့ ရသူများ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Video clip ကနေ တစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
CustoPack Tools ကို အရင်ဆုံး မိတ်ဆက်ပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က Users တိုင်းအတွက် သုံးရလွယ်လို့ပါ - ဒါပေမယ့် သူ့မှာ ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Themes သုံးလို့ မရဘူး - ကိုယ်တွေ့ထားတဲ့ တစ်ခြား Themes တစ်ခုကို CustoPack Tools ကနေ တိုက်ရိုက် ပြောင်းမပေးနိုင်ဘူး - အဲ့တော့ CustoPack Tools မသုံးပဲ တစ်ခြား ကိုယ်တွေ့ထားတဲ့ 3rd party themes တစ်ခုကို Windows မှာ ဘယ်လို install လုပ်မလဲ ?? ဒါကို နောက်တစ်ပိုင်းမှာ ဆက်ပြီး ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
Last edited by KznT; 08-05-2011 at 11:24 AM..
ဆန်းမောင်, ဒဿဂီရိ, မျိုးဟန်ထက်, သက်တန့်, သန့်ဇင်ဌေး, အယ်သား, ဇော်ရဲပိုင်, နိုးတူး, arkaraung, AZM, bagothar85, bonge, g00gle, goldstar, ko myo, kyawminkhoung, minthike, openeyes, tainlwar, thureinsoe, tu tu, yawnathan, zo
လူတိုင်းလည်း သိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် အပေါ်မှာလည်း ပြောထားခဲ့ဖူးပြီ။ Windows7မှာ 3rd party themes လို့ ခေါ်တဲ့ custom themes တွေကို တိုက်ရိုက် ပြောင်းလဲသုံးစွဲခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ 3rd party themes လို့ ပြောရင် နည်းနည်း နားရှုပ်နိုင်တာမို့ သူ့အကြောင်းနည်းနည်း ရှင်းပြချင်ပါသေးတယ်။
3rd party themes နဲ့ Windows7မှာ ပါပြီးသား Themes တွေက ဘာကွဲလဲ ဆိုရင် Windows7မှာ နဂိုပါလာတဲ့ Themes တွေဖြစ်ဖြစ် - Microsoft ကနေ တရားဝင် အလကား ပေးသုံးထားတဲ့ themes တွေ ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးက Themes တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြောင်းသုံးတဲ့အခါမှာ Themes ပြောင်းလိုက်တယ်လို့သာ ပြောတာ တကယ်တော့ သူတို့ကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်း Colours နဲ့ Walpapers ပြောင်းသွားတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ တစ်ခြားဘာမှမှ ထူးထူးခြားခြား မပြောင်းဘူး။ အတိအကျ ပြောရရင် Windows Explorer ပုံစံတွေ အောက်မှာ ပြထားသလို မပြောင်းဘူး။
taskbar ပုံစံတွေ Start button တွေ တစ်ခြား icons တွေ အောက်မှာပြထားသလိုမျိုး ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။
3rd party themes တွေမှာကျတော့ သူ့ themes ကို ပြောင်းသုံးလိုက်တာနဲ့ ခုနက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ပုံစံတွေ အားလုံးပြောင်းသွားတယ်။ Colours နဲ့ Walpapers ပြောင်းယုံ လောက်ထက် စာရင်တော့ အမြင်ပိုဆန်းသွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲလို အမြင်ပိုဆန်းတဲ့ 3rd party themes တွေ သုံးဖို့ ဆိုတာ system files တွေကို patch လုပ်ရတာရှိတယ်။ အဲ့တာကြောင့် အလုပ်မတတ်ရင် ပြဿနာ တက်လွယ်တာမို့ Windows မှာ Default အနေနဲ့ 3rd party themes တွေကို အသုံးပြုခွင့် မပေးထားတာ။ အရင်တစ်ချိန်တုန်းကတော့ system files တွေကို patch လုပ်ရတာ တော်တော်လေး လက်ပေါက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ third party tools တွေလည်း ရှိနေပြီမို့ system files တွေကို patch လုပ်ရတာ မခက်တော့ပါဘူး။ third party tools အမျိုးမျိုး ရှိပြီး အားလုံးထဲမှာ လူသုံးများတာကတော့ UxTheme နဲ့ Universal Theme Patcher ပါ။ ကဲ ဒီတော့ patching files တွေ ဘယ်လိုလုပ်မယ်။ themes အသစ်တွေ စိတ်ကြိုက် ဘယ်လိုသွင်းမယ်ဆိုတာ စလိုက်ကြရအောင်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် နှစ်သက်ရာ 3rd party themes တွေကို Windows7နဲ့ Windows Vista မှာ မိသားစုဝင်များ စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့ Windows XP မှာလည်း ရပါတယ်။
ဒိနေရာမှာ ကျွန်တော် Universal theme patcher အသုံးပြုနည်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ပထမဆုံး လုပ်ရမှာ Universal theme patcher နောက်ဆုံး version ကို Download ချပြီး extract လုပ်ထားပါ။ အဲ့ထဲမှာ .exe ဖိုင်နှစ်ခုပါလာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုက 32 bit Windows အတွက်ပါ။ နောက်တစ်ခုက 64 bit အတွက်ပါ။ 32bit နဲ့ 64bit ကို မခွဲတတ်ရင် 64 bit နှင့် 32 bit OS များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ ဆိုပြီး ရေးထားပေးတာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့် system ပေါ်မူတည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဖိုင်ကို administrator mode ကနေ ( Run as administrator ) run ပါ။ အဲ့လို run လိုက်တာနဲ့ application ကနေပြီး files ဘယ်နှစ်ခု patch လုပ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ပြပါလိမ့်မယ်။
yes ပေးလိုက်ရင် ဘယ်ဖိုင်တွေကို patch လုပ်ရမယ်ဆိုတာ application ကနေ ပြပါလိမ့်မယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဖိုင်အသီးသီးရဲ့ ဘေးက patch ဆိုတဲ့ button ကို click ပေးပြီး patch လုပ်လိုက်ပါ။
System files တွေကို ပြောင်းလဲမှု လုပ်ရလို့ သိပ်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ နေစရာမလိုပါဘူး။ တကယ်လို့ နောင်တစ်ချိန်မှာ 3rd party themes တွေကို မသုံးချင်တော့ရင် ဖြစ်ဖြစ် - မူရင်းအတိုင်း system files တွေကို ပြန်လိုချင်ရင် ဖြစ်ဖြစ် restore button ကနေ ပြန်ပြောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Patching complete ဖြစ်ရင် System files ပြောင်းလဲမှုတွေ effect ဖြစ်အောင် computer ကို restart ပေးဖို့လိုပါတယ်။ Restart ပေးပြီးတာနဲ့ explorer, taskbar, icons စသဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ထားပြီးသား third party themes တွေကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
third party themes တွေကို အသုံးပြုဖို့အတွက် ကိုယ် အသုံးပြုမယ့် themes folder ( .theme file နှင့် .msstyles file ပါဝင်သော ) ကို သက်ဆိုင်ရာ "%windir%\_Resources\_Themes\_" folder အောက်ကို Copy ကူးထည့်ပေးရပါမယ်။ %windir% ဆိုတာ ကိုယ့် စက်အသီးသီးအလိုက်က "Windows" directory ကိုဆိုလိုတာပါ။ အဲ့လို ကူးထည့်ပြီးတာနဲ့ .theme file ကို double-click ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် theme ကို apply လုပ်ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ် install လုပ်မယ့် themes တွေမှာ theme folder တင်မက ExplorerFrame.dll, shell32.dll, Explorer.exe စသဖြင့် တစ်ခြား System files တွေပါ အစားထိုးဖို့ တစ်ခါတည်း ပါလာမယ် ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ့ third party themes တွေကို install လုပ်ရလွယ်အောင် Windows Themes Installer အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သူ့ကိုသုံးပြီး third party themes တွေနဲ့ အတူပါလာတဲ့ System files တွေကိုပါ အလွယ်တကူ သွင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Windows Themes Installer အသုံးပြုနည်းကလည်း ခက်ခက်ခဲခဲ မရှိပါဘူး။ ကိုယ့် theme folder နဲ့ အတူပါလာတဲ့ system files အမျိုးအစားတွေပေါ် မူတည်ပြီး boxes တွေကို ဖော်ပြပါအတိုင်း check လုပ် Browse ကနေတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ system files တွေကို ခေါ်ယူပြီး Install theme ကို click ပေးယုံပါပဲ။ တကယ်လို့ သဘောမကျရင် default system files တွေကို ကြိုက်တဲ့အချိန် Restore default system files ကနေတဆင့် သွင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်ကြိုက် စုဆောင်းထားတဲ့ 3rd party themes တွေကို နောက်နေ့တွေမှာ စုစည်းဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
Last edited by KznT; 21-06-2011 at 03:00 PM..
ကိုသဝေထိုး, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, bagothar85, bonge, g00gle, htun30, minthike, openeyes, pannuko, zo
ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေကတော့ ကျွန်တော် Deviant Art ကနေ နိုင်သလောက် စိတ်ကြိုက် ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ Themes တွေပါ။ အထဲမှာ Themes က ၅၅ ခုပဲ ပါပေမယ့် ပမာဏကတော့ 670MB လောက်ဖြစ်နေတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ရလာရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Themes တွေထည့်ထားတဲ့ folder တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ themes file, Read me နဲ့ theme ကို install မလုပ်ခင် preview ကြည့်နိုင်အောင် photo တစ်ခုပါ ထည့်ထားပေးပါတယ်။
Read me ကို ဖွင့်ဖတ်မယ် ဆိုရင် theme ကို ဘယ်ကနေ ယူလာတဲ့ URL ကို ကျွန်တော် ထိပ်ဆုံးမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ internet ရှိရင် သက်ဆိုင်ရာ link ကို လိုက်ပြီး latest ဖြစ်မယ့် theme ကို ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် instruction ကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ရလာတဲ့ themes တွေကို အပေါ်မှာ ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးတဲ့ နည်းတွေသုံးပြီး ပြင်ယူကြည့်ပါ။
Last edited by KznT; 21-06-2011 at 05:15 PM..
စစ်တွေသားချေ, လမ်းပြကြယ်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, arkaraung, bagothar85, g00gle, htun30, Lwin Thu, minthike, openeyes
24-06-2011, 12:40 PM
Windows7မှာ သုံးမယ့် 3rd party themes တွေကို ပြင်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ ဒီ Thread အတွက် လိုအပ်မယ့် Software တစ်ချို့ မိတ်ဆက်ရင်း ဒီနေ့ အဆုံးသတ်ပို့စ် ရေးနိုင်ပါပြီ။ Themes ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ကျွန်တော် စုဆောင်းထားသမျှ တိုလီမုတ်စ Software အားလုံး တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း တင်ထားပေးပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ် links တွေကိုတော့ အောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်နဲ့ အတူ ရရှိလာမယ့် folders များစာရင်းကတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ။ folder တစ်ခုချင်းစီမှာပါမယ့် software တွေ ဖိုင်တွေကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာ မိတ်ဆက်ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်။
ဒေါင်းလုပ်ပြီးလို့ ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ရင် Theme Accessories ဆိုတဲ့ ဖိုဒါတစ်ခု ရလာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ထဲကို ထပ်ဝင်ရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖိုဒါ ( ၁၄ ) ခုနဲ့ ဖိုင်တစ်ခု တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Read me.txt - တစ်ခြားဘာကိုမှ မလေ့လာသေးခင် ဒီဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး အရင်ဆုံးဖတ်ပါ။ သူ့ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဖိုဒါအလိုက် ဘယ်ကယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ links တွေ - ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့ ဖြေရှင်းချက် ရှိတဲ့နေရာတွေဆီ ကျွန်တော် လမ်းညွှန်ပေးထားပါတယ်။
Best Icons For Windows - ဒီထဲမှာတော့ Theme ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ အတူ တွဲဖက်အသုံးပြုသင့်တဲ့ အကောင်းဆုံး Icons တွေ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Gdipp - Gdipp ဆိုတာ Windows text render ကို Mac OS နဲ့ Linux distributions က ပုံစံတွေအတိုင်း ဖြစ်လာအောင် ပြင်ယူနိုင်တဲ့ Software ပါ။ ကွာခြားချက် အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Original System Files - Theme ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ Errors တွေဖြစ်လာတဲ့အခါ မူရင်း System Files တစ်ချို့ကို ပြန်လည်အစားသွင်းနိုင်အောင် ဒီဖိုဒါအောက်မှာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Resource Hacker - သူကတော့ Windows executable resources ကို view and modify လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ အားလုံးသိကြတဲ့ Resource Hacker ဖြစ်ပါတယ်။
Start Orb Changer - Start Orb Changer ဆိုတာ Windows ရဲ့ Start Button ကို Change တဲ့ App လေးတစ်ခုပါ။ နှစ်မျိုးထည့်ပေးထားပါတယ်။ နှစ်သက်ရာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ Windows7Start Button Changer v 2.6 (for SP1 and old W7 version without update).exe ကိုတော့ Recommend ပေးပါတယ်။
Take Ownership - system files တွေကို ပြင်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ ownership မရပဲ ပြင်ယူလို့ မရပါဘူး။ ownership အဆင့်လိုက် လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း တော်တော်လေး အချိန်ပေးရပါတယ်။ လက်ပေါက်ကပ်ပါတယ်။ ဒါကို ကလစ်နှစ်ချက်နဲ့ အဆင်ပြေအောင် TakeOwnership.reg file တစ်ခု စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ သူ့ကို installed လုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့ အခါ system files တွေကို ပြင်ဆင်ချင်ရင် အရင်ဆုံး Right click ထောက်ပြီး Ownership ယူပါ။ ပြီးမှ ပြင်ဆင်ပါ။ အသေးစိတ် အသုံးပြုပုံကို ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Theme managers - Theme managers ကတော့ 3rd party themes တွေကို Install လုပ်ဆောင်ရာမှာ လွယ်ကူသထက် လွယ်ကူအောင် ထည့်သွင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် အသုံးပြုပုံတွေကို Read me file တွေမှာ ကြည့်ပါ။
Theme Patchers - 3rd party themes တွေကို Install လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် System files တွေကို patch လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုဖို့ Theme Patchers တွေ စုစည်းပေးထားတဲ့ folder ဖြစ်ပါတယ်။
Windows7Aero Blur Tweaker - Windows7Aero Blur Tweaker ဆိုတာ Windows7Aero မှာ မှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံကို ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ပုံစံဖြစ်လာအောင် ပြင်ယူနိုင်တဲ့ Tweaker ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ။
Windows7Logon Background Changer - သူကတော့ အမြင်ရိုးနေတဲ့ logon background ပုံစံကို နှစ်သက်ရာ wallpapers တွေနဲ့ အစားထိုးနိုင်အောင် ပြင်ယူနိုင်တဲ့ Logon Changer ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာပါ။ ခက်ခက်ခဲခဲ မရှိပါ။
Windows7Logon Screen Rotator - သူလည်းပဲ Windows7Logon Background Changer နဲ့ သဘောတရားတူပါတယ်။
Windows7Navigation Buttons Customizer - သူကတော့ Windows7ရဲ့ navigation buttons တွေကို စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့် Buttons Customizer ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာပါ။
Windows7Start Buttons - သူကတော့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့ Start Orb Changer နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုဖို့ Start Buttons တွေဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သက်ရာ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
XWindows Dock - သူက Mac နဲ့ Linux မှာ သုံးကြတဲ့ Dock တွေလိုမျိုးပဲ Windows မှာ သုံးဖို့ Dock ပါ။ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာပါ။
Last edited by KznT; 24-06-2011 at 04:20 PM..
ကိုသဝေထိုး, စွမ်းကမ္ဘာ, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, bagothar85, g00gle, htun30, minthike, openeyes, zo
how to, themes, user guide, windows 7